Garmin VivoActive 3, ihe onyonyo izizi nke a 'wearable' putara | Akụkọ akụrụngwa
Garmin VivoActive 3, onyonyo izizi nke 'wearable' a putara
Garmin bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị asọmpi na ngwaahịa wearable lekwasịrị anya n’egwuregwu. N'ime ngwaahịa ya, anyị nwere ike ịchọta elekere mara mma na mgbaaka nke gbadoro anya na golf, igwu mmiri, ịgba ịnyịnya ígwè na, n'ezie, omume golf. na-agba ọsọ.
N'otu aka ahụ, anyị chọpụtara na e nwere ezinụlọ dị iche iche nke ngwaahịa na taa anyị ga-elekwasị anya na VivoActive, ọla aka ma ọ bụ elele anya na GPS nke na-atụle ọnụọgụ obi ma nwee ike ịmata njem dị anya iji chịkwaa mbọ a na-eme. Agbanyeghị, ọ dị ka ụlọ ọrụ ahụ amalitela ịmalite onye ọhụụ n'ezinaụlọ ahụ ma ọ dị ka elekere mgbanaka karịa mgbaaka. Nke a bụ ihe ọhụrụ Garmin VivoActive 3.
wearable, ọnụ ụzọ nke chọpụtara ya, ahapụla anyị ọtụtụ ihe oyiyi nke ọ ga-adị ka ya. Ma dika anyi gosiworo, ihe kacha ịtụnanya bụ usoro nhazi ọhụụ na ụlọ ọrụ ahọrọla maka mwepụta a.
Ọ bụ eziokwu na ọ bụghị naanị ngwaahịa Garmin nke dị ka elekere mgbatị. Ikwesiri ile anya na Garmin Vivomove nke bụ ihu ọma a elekere na-agụta gị nzọụkwụ. Agbanyeghị, nke a Garmin VivoActive 3 bụ ihe ọzọ: karịa na usoro nke smartwatch.
Dị ka ihe oyiyi ahụ si zoo, na azụ nke nche ahụ ga-enwe ihe mmetụta iji tụọ ụda obi. N'otu aka ahụ, na enyo ya - nke amaghi oke ya n'oge a - ọ gaghị egosi naanị ozi niile gbasara mmega ahụ anyị, kamakwa ọ ga-ejidekwa amamọkwa niile na-abata. Nke ahụ bụ, ma email, netwọk mmekọrịta, na ọrụ izi ozi ozugbo dị ka WhatsApp. Ya mere, ọ bụ karịa ụfọdụ na ọ na-aga karịa na akara nke Apple Watch ma ọ bụ Samsung Gear S3, karịa nke nke nlele egwuregwu dị mfe. N'ezie, ị ga-achọ mkpanaka n'ọnọdụ niile. Ugbu a, ugbu a ma ụbọchị mmalite ma ụgwọ ya amaghi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Garmin VivoActive 3, onyonyo izizi nke 'wearable' a putara
BlackBerry Glass Canada na-esonye na bandwagon nke 'wearables' maka ụlọ ọrụ